पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नर्भिक अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी, पूर्वराजा तनावमा — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएकी पूर्वरानी कोमल शाहको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेको छैन।
राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएकी पूर्वरानी शाहलाई बिहीबार प्लाज्मा दिइएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई आइसियूमा राखेर उपचार थालिएको थियो।
शाहको स्वास्थ्य स्थिर र गम्भीर रहेको नर्भिकका अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो। ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै पनि सुधार आउन सकेको छैन, पहिलेकै अवस्था हो,’ स्रोतले भन्यो। उपचारमा संलग्न डा. जेपी जैसवालले भने पहिलेभन्दा स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताए।
‘पहिले त मन्त्रिपरिषद् बैठक नै यही कक्षमा बस्थ्यो, सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्ने भएपनि ठूलो हलमा हुन थालेको छ,’ थापाले भने, ‘अहिले पनि १२–१३ जनासम्मको बैठक बस्न यो कक्षको प्रयोग हुन्छ ।’ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या पनि बढेको छ ।
सरकारले नेपाली सेनामार्फत काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार शय्याको अस्थायी संरचनाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमितले अक्सिजनसहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा शय्या नपाउने समस्या टार्न नेपाली सेनालाई राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सातै प्रदेशमा एक/एक हजारको दरले होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौंमा १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउन लागिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र रुसको खोप ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आफैं आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न सरकार प्रयत्नशील छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक, अन्य मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग खोप, अक्सिजन थेरापी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फर्निचरलगायत सामग्री सहयोग गर्न अपिल पनि गरेका छन् । २१ लाखलाई पहिलो डोज र ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ४५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।